Aaway badhankii ku xigay? | Martech Zone
Isticmaalku waa saynis, laakiin qaar ka mid ah waa dabiici. Waxaan xasuustaa inaan dad badan kala dooday dadka ku saabsan isticmaalida markii aan ka shaqeynayay Maareeye Badeecad. Waxaa jira waxyaabo la siinayo - sida sida indhaha ay ula socdaan shaashadda (bidix ilaa midig), sida ay hoos ugu socdaan, iyo sida ay filayaan in wax looga qabto dhinaca midig ee hoose.
Cilmiga badan kuma lug laha, waxyaalahan qaarkood waa labadaba dareen ahaan, qaarna waxay caadiyan ku saleysan yihiin isbeddelladii hore ee marinka internetka.
Caawa waxaan heysanay saaxiib gabadheyda, marka waxaan go'aansaday inaan ka dalbado khadka tooska ah Dominos. Websaydhkooda cusubi aad buu u jilicsan yahay - waxay u eg yihiin dhammaan Java. Garaaf ahaan way ku qanacsan tahay isha, waana dhakhso. Way ka qurux badan tahay Pizza Hut ama Papa John's… wayna shaqeysaa, si ka duwan Donato.
Re: Donato's: Bilo ka dib waxaan u maleynayaa inaan isku dayo darsin ah oo aanan dalban karin sababtoo ah sida gaabiska ah ee ay ahayd ama sababtoo ah shaashadda weyn ee .NET.
Waxaan ka helay hal arrin soo jiidasho leh oo ku saabsan isticmaalka goobta, in kastoo. Fiiri shaashadan oo qiyaasi inaad buuxinayso:
Ka dib markaad buuxiso macluumaadkaaga, indhahaagu waxay raadinayaan - oo filayaan - inaad u gudubto shaashadda xigta adigoo gujinaya midigta. Waxay ahayd inaan raadsado waxoogaa kahor intaanan helin badhanka xiga. Dareenkeyga waxaa qabtay batoonka kuubanka iyo berrinka dhanka midig, marka dhib ayaa iga haysatay helitaankeeda.
Hal isbadal oo fudud ayaa ka dhigi kara boggan mid aad ufudud waana hubaa, inuu hagaajiyo badalaada macaamiisha:
Kaliya u wareejinta batoonka midigta, halkaasoo indhahaygu filanayeen inay raad raacaan, waxay noqon laheyd horumar ballaaran xagga isdhexgalka haddii kale qurux badan. Waxaan sidoo kale heli lahaa midab cusub, laga yaabee mid cagaar ah, si aan u siiyo muuqaalka muuqaalka guud ahaan arjiga illaa qofka uu dhammeeyo. Mawqif isdaba joog ah, midab, iyo caan ayaa bixin doona khibrad aan kala go 'lahayn oo u horseedi doonta dadka isticmaala barta.
Dheeraad cusub oo ku saabsan goobta Dominos waa Pizza Tracker:
Qaybta qosolka badan ayaa ah in qayb kastaa ay ku xumaato gudaha iyo dibedda… iyadoo qaybta 5 (gaarsiinta) ay tahay qaybta ugu weyn. Si kale haddii loo dhigo, Dominos waxaa laga yaabaa inuu hadda dhistay feyl daqiiqad ah oo 30-daqiiqo ah oo ku filan oo kala duwan si uu u helo joogitaan +/- 15 daqiiqo (malahayga). Waa khayaali… laakiin way shaqaysaa.
Waxaa jira isdhexgal dhab ah oo ku saabsan bogga - magaca darawalka geynta ayaa halkaas ku sugnaa si jawaab celin deg deg ah iyo qiimeyn loo helo. Taasi waa qabow!
Tags: magnetism macaamiishaDan ZarrellahawlgelintaKipp BodnarMaya Grinbergwar-saxaafadeedspamUnsubscribeqiimaha infographicwaa maxay infographic
Sida loo Dammaanad Qaado Shabakadaadu waxay ku qoran tahay Liiska Emailka
Ilaalinta Shakhsigaaga internetka
Feb 21, 2008 markay ahayd 9:13 PM
Wanaagsan, hadda waan gaajooday… haddii kaliya Tareenka dhulka hoostiisa la geeyo.
Febraayo 22, 2008 saacadu markay tahay 11: 51 AM
Ma keenaan, laakiin in yar oo iyaga ka mid ah ayaa internetka ka dalbanaya. Maahan nidaam quruxsan, in kastoo! Waxaan ku qasbanaan lahaa inaan qoro buug ku saabsan arimahooda isticmaalka.
Feb 22, 2008 markay ahayd 12:40 PM
Kaliya maahan inaan heli kari waayey badhanka “Xiga”, markii aan raadinayey waan joojin kari waayey inaan indhahayga u jiheeyo badhanka weyn ee “KOOBANADA ONLINE”. Haddii aad isku mashquulineyso meesha uu ku yaal badhanka / isku xirka ku xigga, ha u qodin naftaada qoto dheer adoo ku daraya badhan weyn oo casaan ah meel kale shaashadda.
Feb 22, 2008 markay ahayd 4:20 PM
Badhankaas soo socdaa waa arrin aad u weyn. Waxaan ku jiray bogag ka hor meeshii ay adkayd in la maro (oo ay ugu wacan tahay naqshad jilicsan) oo aan hadda baxay.
Mar 20, 2008 at 12: 22 PM
Xaqiiqdii waxaan ku hayaa macluumaad gudaha ah oo ku saabsan tan Tracker-na waa mid dhab ah - waxay fure u tahay nidaamka amar-bixinta gudaha ee Domino ee ay u adeegsadaan inay ku dabagalaan waxtarka. Xaqiiqdii waa sax +/- 40 sekan.